फेरि विराट नै पहिलो स्थानमा ! १० भित्र पर्न सफल अरु को-को ? [नाम र अंक] - Everest Dainik - News from Nepal
फेरि विराट नै पहिलो स्थानमा ! १० भित्र पर्न सफल अरु को-को ? [नाम र अंक]
एजेन्सी, भदाै ८ । भारतीय क्रिकेट मिटका कप्तान विराट कोहली पुनः टेष्ट बरियतामा ब्याट्सम्यानतर्फ शीर्ष स्थानमा पुगेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) ले सार्वजनिक गरेको नयाँ टेष्ट ब्याट्सम्यानको वरियतामा कोहली ९३७ अंकसहित शीर्ष स्थानमा पुुगेका हुन्। कोहलीले अष्ट्रेलियाका पूर्वकप्तान स्टेभेन स्मिथलाई फेरि पछि पारेका हुन्।
इंग्ल्यान्डविरुद्ध तेस्रो टेष्टमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि कोहली शीर्ष स्थानमा फर्किएका हुन्। नयाँ वरियताको दोस्रो स्थानमा रहेका स्मिथले ९२९ अंक पाएका छन्।
अरुको स्थान कस्तो ?
-एडीन मार्क्रम, दक्षिण अफ्रिका
याे पनि पढ्नुस म्यानमारविरुद्ध नेपालको कीर्तिमानः २ ओभरमै सन्दीपले लिए चार विकेट !
ट्याग्स: birat koholi, Cricket Team, विराट नै पहिलो स्थानमा